Une dambudziko rekusarudza bhokisi remadhirowa? Isu tinokuraira iwe! - Fenicha - kurudziro
Une dambudziko rekusarudza bhokisi remadhirowa? Isu tinokuraira iwe!
1 Kurume, 2018 Kukadzi 16, 2021 arun Mazuva ano mabhokisi emadhirowa
Kana iwe parizvino uri muchikamu chekupa imba yako uye neimwe nzira uchiri kushaya imwe nzvimbo yekuchengetera, asi kabhodhi hombe haina kuwedzera nzvimbo yakakwana, kana kuti haikwane mukamuri rako, usaore moyo. Wadhirobe haisiriyo mhinduro chete, pane imwe chete, inoshanda zvakanyanya - chipfuva chemadhirowa. Iyi fenicha inoyevedza inozadzikisa basa rayo rekushongedza pamwe neiro rinoshanda. Nekudaro, chii chekutarisa nezvacho pakusarudza uye ndezvipi zvinhu zvekusarudza?
Tisati tasvika pachinyorwa pachacho, tinoda kukwevera kune ako akasarudzika ezvipfuva zvemadhirowa ezvinhu zvakasiyana, pamitengo yakanakisa, iyo kuratidza nekudzvanya HERE.
Chest yemadhirowa sechikamu chemba yekutandarira
Kana iwe uri kufunga uye uchiri kuzeza pamusoro pekuti bhokisi remadhirowa ndiyo sarudzo chaiyo yeimba yako yekutandarira, tinokuvimbisa kuti ndizvo. Kwete chete iyo inokushandira iwe zvakakwana kuisa kure kure zvinhu zvakawanda, senge magazini, maCD kana maDVD mafirimu ayo anongogona chete kutsausa mumba, asi aine zvishoma zvishoma, senge vhasi remaruva kana ndiro yemichero, ivo chipa chazvino uye chakashongedzwa kubata. Nekudaro, ita shuwa kuti iwo mumvuri weruvara unoenderana nemadziro akapoteredza eimba yekutandarira.
Kana iwe uri mumwe weavo vasina imba yekutandarira yakakura, tinokurudzira kuti iwe utarise pane akajeka mavara emidziyo ine glossy pamusoro, nekuda kwekuti imba yese ichawedzerwa zvakakwana.
Pane kupokana, kana minimalism inokodzera iwe zvirinani, kana chinangwa chako kuita kuti imba igadzikane, fanicha mune yakasviba mavara ichave sarudzo kwayo iwe.
Chest yemadhirowa mubedroom? Kuregererei!
Ive nekuchenjerera kwazvo paunosarudza chifuva chemadhirowa enzvimbo yekurara! Pano zvakare, mitemo yakati wandei inoshanda, senge iro dhizaini yaro inowirirana neyakavakirwa yakarongedzwa kamuri, asi zvakare haifanire kusiyana musitaira. Kana iwe ukavaka pane yemaitiro echisimba, sarudza chifuva chemadhirowa akagadzirwa nechipboard, pane zvinopesana, kana iwe uine mubhedha wesimbi, chipfuva chemadhirowa chine yakakwira gloss uye yakasarudzika ruzivo ichave yako chete.
Paunenge uchisarudza, teererawo inokwana inokwana nzvimbo yekuchengetera, iyo yauchanyatso shandisa mubedroom, kungave kwehembe dzemukati, matauro, machira uye machira kana chero chimwe chinhu.
Kana chiri chebhokisi remadhirowa mukamuri revana, iwe unofanirwa kutarisa kune zvishoma zvinhu kamwechete. Yekutanga, inonyanya kukosha yeiyi, hongu, kuchengetedzeka. Kunyanya, isu tinoreva kuti kuvhurwa kwayo hakufanirwe kuve kwakaomarara asi kwakachengeteka, kuitira kuti mwana azvibate iye ega. Uyezve tarisa kune zvisiri-zvine njodzi zvinhu zvinosangana nezvose zvakakosha zvinodiwa uye maitiro.
Pfungwa yechipiri kuvakwa kwebhokisi remadhirowa pachawo. Tarisa pane avo vane hombe uye yakadzika nzvimbo yekuchengetera, kuitira kuti, pamusoro pezvinhu zvakajairika senge mbatya, zvimwe zvinhu zvinobva mukamuri zvinokwana mazviri, angave matoyi, mabhuku kana zvimwe zvakasiyana.
Muzhinji, zvisinei, sarudzo yakanaka pakusarudza mabhokisi emadhirowa emakamuri evana ndeaya ane akawanda madhirowa nemikova, ayo anonyanya kushanda uye anodhura.
Tinovimba kuti mazano edu pamwe nemazano ave anobatsira kwauri uye kuti iwe uchaaishandisawo mukupa imba yako. Kana iwe uchifarira, unogona kutarisa akasiyana masheche emadhirowa nemitengo yakanakisa yauinayo tinya HERE kuti utarise.
Kamuri diki yekutandarira? Hapana dambudziko, isu tinokupa zano iwe kuti ungaita sei nazvo!
Uri kusarudza pakati pejira uye chigaro cheganda? Iwe unofanirwa kuziva izvi nezvavo!